Nagu saabsan - Anhuang Electric Power Technology Co., Ltd.
ANHUANG Korontada AWOODDA FARSAMADA CO., LTD
ANHUANG waa shirkad casri ah oo naqshadeynta xirfadeed iyo soosaarida 3.6kV ilaa 40.5kV Dhexdhexaad Qalabka fiilooyinka fiilooyinka, wadajirka terminal, qaybaha korontada iyo golaha wasiirada oo dhan. Waxaan haynaa kooxdeena xirfadeed ee farsamada si aan u qaabeyno oo aan u sameysano caaryada nafteena, taas oo ka caawisa macaamiisha inay sameyso OEM ama ODM. Waxaan aasaasnay ​​sanadkii 2004, waxaan ku bilownay ganacsigeenna fiyuus danab sare leh, ka dib waxaan bilownay inaan soo saarno hillaac danab iyo isku xirayaasha fiilooyinka. Sidoo kale, waxaan ku koray horumar xawaare sare leh oo shirkadeena ah sababtoo ah koontaroolkeena tayada sare leh iyo maaraynta tayada sare leh. Hada badeecadeenu waxay siisaa shirkadaha badankood Shiinaha waxayna u dhoofiyaan dalal kale oo badan, sida Talyaaniga, USA, Ruushka, iwm.
10kV-35kV Xidhiidhiyayaasha Loadbreak iyo bushkuleeti xamuul ah oo si ballaadhan u adeegsada suufka saliida lagu shubay, suufka isku xidha, dilaaga isku xidhayaasha iyo deabreak bushings oo si weyn ugu adeegsada qalabka korontada ku shaqeeya ee dhexdhexaadka ah ee GIS ama kabista laanta, Epoxy Bushings tuubo, Xarig-hillaacyo, Golaha Kaydka Cable, Qaybta Wicitaanka Wicitaanka, SF6 Is-beddelka Loadbreak, qaybaha korantada dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah, isku-xidhka fiilada dhexdhexaadka ah, iwm.
Waxaan leenahay dhinacyadooda:
Waxaan bixinnaa alaab tayo sare leh, qiimo jaban oo loogu talagalay nidaamyada korantada adduunka oo idil.
Injineeradeena xirfadleyda ah, farsamayaqaanada iyo kooxda maareeyayaasha marwalba waan fulineynaa balanqaadkeena: ANHUANG kaliya ma bixineyso alaab tayo sare leh oo qiimo jaban, laakiin sidoo kale waxay bixisaa tayo sare, hufan, adeeg deg deg ah iyo taageero farsamo si loo hubiyo baahida macaamiisha.
Shirkadeena waxay heshay shahaadada ISO9001, ISO1401, OHSAS18001.
Shirkadeena oo u hogaansanta "korantada badbaadada, weligeedba dhalaalaysa" sida dadnimada shirkadeena. Waxaan diyaar u ahay inaan kula shaqeeyo adiga oo gacmaha is haysta si aan mustaqbal wanaagsan u dhisno.